Kygo A11 / 800, ihe kacha adịchaghị na kagbuo ọdịyo [Nyochaa] | Akụkọ akụrụngwa
Anyị na-aga n'ihu na-enyocha ngwaahịa ndị ahụ ị chọrọ ịma. Anyị maara na anyị nọ n'oge nke ezi ekweisi ekweisi, agbanyeghị, a ka nwere ezigbo ndị ọrụ ole na ole ogo na njikwa kwụ ebe ha nọ. Ekweisi ekweisi na-anọkwa na ahịa, Mana ijiiche onwe ha, ha ga-ahọrọ nkasi obi na teknụzụ dị elu, nke ahụ bụkwa kpọmkwem ihe o merela ma ọ bụrụ na ha bara uru n'ezie.
Kygo ya na A11 / 800 ya, ikekwe mkpọtụ kachasị elu na-akagbu ekweisi na ahịa na ụda dị elu, anyị nyochara ha ya mere ị nwere ike ịmata n ’omimi etu ha si arụ ọrụ.
1 Nzube na ihe: Minimalism na obere esemokwu
2 Nkpochapu mkpọtụ zuru ezu m hụtụrụla
3 Ngwa a bu uru bara uru
4 Nwere onwe, ọrụ na njirimara ọrụaka
5 Ahụmịhe onye ọrụ yana uche onye editọ
Nzube na ihe: Minimalism na obere esemokwu
Ebumnuche Kygo Life A11 / 800 bụ ekweisi mara mma. Anyị nwere nke nwere ntọala polycarbonate nke kpatara esemokwu. Polycarbonate na-adịte aka karịa ka ọ dị, n'eziokwu ọ na-akpụzi kama ịkpụ, n'ihi ya, ọ bụ nkwa nke anwụ ngwa ngwa. Otú ọ dị, ọ na-esighi ike iguzogide ọkọlọtọ, na mmetụta plastik ahụ na ekweisi nke ọnụahịa ụfọdụ na-ewepụ otu ụdị onye ọrụ. Ọ bụ eziokwu na echiche mbụ dị otu a, mana anyị bụ ndị ma ụdịrị ihe a maara na ọ dịghị ọnụ ala ma ọ bụ na ọ dịghị ọnụ.
Ibu ibu: 250 grams
Agba: Nwa na ọcha
Enwere ike imeziwanye mgbanwe ahụ, mana ọ nwere nnukwu ihe eji arụ ọrụ na ọkwa mpịachi. Earbud ọ bụla na-agbagharị ihe dị ka 90º na ntanetị ma na-agbada. Anyị nwere mkpuchi akpụkpọ anụ yiri ya na isi isi na ekweisi, nke dị mma ma nakọtara ntị. Anyị nwere ogwe aka na aka ntị aka nri roba nke na-enye anyị ohere ịmekọrịta ihe na onye ọkpụkpọ ahụ, yana bọtịnụ atọ (ANC - ON / OFF - AWS) na otu ntị ahụ na a Ọnọdụ LED maka ihe enyemaka ịnụ ihe ọbụla. Maka njikọ anyị nwere 3,5mm jaak maka aka nri na ọdụ ụgbọ USB-C a na-akwụ ụgwọ ya na ntị ntị aka ekpe. N'ụzọ doro anya, a na-agbatị isi ya ma nwee chassis ọla n'ime.
Nkpochapu mkpọtụ zuru ezu m hụtụrụla
Anyị nwere bọtịnụ na nkagbu mkpọtụ, agbanyeghị, a na-atụ aro ya nke ọma ịwụnye ngwa Kygo Sound (android/iOS) iji nwee ike ịnụ ụtọ atụmatụ ya niile. Nkụpu mkpọtụ ahụ bụ naanị ihe magburu onwe ya, zuru oke na ọkwa nke akara ama ama dịka Sony gbasara usoro ịkagbu aha, mana… ọ bụrụ na anyị chọrọ ihe ọzọ? Nhazi a niile na-enye mkpọtụ mkpọtụ nke Kygo A11 / 800 ndị a:
Mgbaghara mkpọtụ zuru oke: Naanị anyị na-ege egwu
Ama mmata: Emechi 50% nke mkpọtụ na 100% nke olu mmadụ
Ọnọdụ ikuku: Ọ na - ejide ụda dị na mpụga ma na - enye anyị ohere ikwu okwu mgbe ị na - ege egwu, ọ dị ka ọ dị na egwu dị nọnyere gị na ịnweghị ekweisi.
Ka ihe atụ, njem site na njem ọha na eze dịka ụzọ ụgbọ oloko, nkagbu oke mkpọtụ na-ekewapụ gị kpamkpam, mana ọ dịghị ihe a tụrụ aro karịa ya "Ọnọdụ ọnọdụ" ịga n'okporo ámá na-enweghị nhụjuanya ọ bụla. Ọ bụ oge mbụ na ịkagbu mkpọtụ abụrụla nke onwe ma ọ na-enye kpamkpam ihe ọ kwere nkwa na ọnọdụ ọ bụla, kedu ka ị si eme ya? Ọ dị ka anwansi.
Ngwa a bu uru bara uru
Emechaghị Kygo Life A11 / 800 ma ọ bụrụ na itinyeghị ngwa ahụ. Sọftụwia adịchaghị mkpa na ngwaahịa dị ka nke a, ha yikwara ka ha mụtara ọtụtụ ihe n'aka Sonos ibe ha na nke a. Ngwa a bụ uru agbakwunyere nke na-ebuli Kygo Life A11 / 800 ka ọ bụrụ nke kacha dị oke mma, mmezi zuru oke na ọtụtụ ọrụ ị na-amaghị na ị chọrọ ruo mgbe ịnwale ya.
Image EQ na-enye gị ohere ịhazigharị ụdị ụda ahụ na-amasị gị na-enweghị ịgbanye EQs mara mma. na nke a na-enwe ekele na ọkwa nke ịdị mfe na arụmọrụ. Anyị nwekwara usoro ịhazi aha dị mfe iji gbanwee aha ekweisi anyị, gbanye ma gbanyụọ ụdị mkpọtụ mkpọtụ dị iche iche wee chọpụta n'ụzọ zuru ezu nnwere onwe fọdụrụnụ. N'agbanyeghị nke a, ngwa ahụ adịghị mkpa ịmara, dịka ọmụmaatụ, nnwere onwe, ebe enwere ike ịhụ ya na ngwa ngwa ngwa nke iPhone dịka ọmụmaatụ.
Nwere onwe, ọrụ na njirimara ọrụaka
Ndị a Kygo Ndụ A11 / 800 ha gafere ụda, ha na-achọ ịnye ahụmịhe. Otu ihe atụ bụ na ha nwere usoro nchọpụta na-akwụsị ma malitekwa egwu na akpaghị aka mgbe anyị wepụrụ / tinye ha, ee, dị ka AirPods. Mana ọ na-aga karịa, ịmalite site na ha nwere Bluetooth 5.0 iji zụlite ọdịyo ma chekwaa ume, dịka ha nwere NFC, nke ga - enyere ha aka ijikọ na ngwaọrụ gam akporo naanị site na iweta nkwụnye ntị aka nri na onye na - agụ akwụkwọ ama.
Ndị ọkwọ ụgbọala: 40 mm.
Uche: 110 ± 3dB
Oge nzaghachi (± 3dB): 15 Hz - 22 KHz
dakọtara na aptX, aptX LL na AAC formats
Agbanyeghị, nnwere onwe bụ ihe dị mkpa n'oge a. Anyị nwere batrị 950mAh, nke nwere ike iweta oge 18 nke ọkpụkpọ site na Bluetooth na iji kagbuo mkpọtụ ahụ, na-ewega anyị ruo awa 38 ma ọ bụrụ na anyị anaghị eji ihe ọ bụla ọzọ karịa eriri (Lee ihe jọgburu onwe ya!). Iji kwụọ ha ụgwọ anyị na-eji USB-C o we were anyị ihe dịka elekere abụọ, nke na-adịghị adị mkpụmkpụ. Banyere ọchịchị obodo, n'ezie, ekweisi adịghị ka nsogbu ọ bụla na ahụmịhe m na-ekpuchi data nke onye nrụpụta, ihe na-adịchaghị na ahịa a.
A fechaa na ala imewe
Kachasị mma dabere na mkpọtụ kagbuo m hụtụrụla
Ha guzobere ngwa ngwa ma nwee ọtụtụ atụmatụ
Redirịba ọchịchị obodo
Akụrụngwa nwere ike ọ gaghị eme ka echiche kacha mma
Aka emetụtụ nwere ụfọdụ lag
Okwu ahụ buru ibu, ma eleghị anya akpa ga-aka mma
Abụ m onye hụrụ Ezi ekwe ntị ntị, onye ọrụ kwesịrị ntụkwasị obi nke AirPods, ọ ga-anọgide na-adị. O sina dị, mgbe m na-anọdụ ala na kọmputa iji rụọ ọrụ ma ọ bụ mgbe m na-aga njem, Kygo Life A11 / 800 ndị a na-ewere ọnọdụ etiti. Ha nwere ọtụtụ vasatail mkpọtụ kagbuo m na-agbalị ka ụbọchị ma dị mma ịnọnyere ruo ọtụtụ awa n'otu oge. N'ime ahịa maka ekweisi "adịchaghị" n'ụdị a (ọ bụghị naanị ndị na-anụ ọkụ n'obi) Achọtara m ole na ole na-asọmpi n'ihe banyere ogo ọdịyo ma ọ nweghị nke gbasara arụmọrụ nke arụchara nke ọma
Isi ihe na-adịghị mma Ihe m na-achọta, n'agbanyeghị agbachitere polycarbonate, bụ ihe mmetụ nke ihe ndị ahụ na-adabara. Achọpụtala m ntakịrị oge na nzaghachi nke njikwa akara mgbasa ozi na ike na bọtịnụ ANC dị ka ihe na-ezighi ezi ma zoo m. Site na nkwekọrịta, anyị nwere ngwa nke bụ ezi obi dị oke ọnụ, nnwere onwe dị egwu, ogo ọdịyo dị elu na mkpọtụ mkpọtụ zuru oke na nke m gbalịrị ịlụ. Ọ bụrụ na ị masịrị i nwere ike inweta ha site na 249,00 ya na ihe kacha mma dị n’ime EGO A. Ọ bụ ezie na ị ga-ahụkwa ekweisi ndị a n'akụkụ ụfọdụ nke ire ere dịka El Corte Inglés.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Kygo A11 / 800, ihe kachasị adịchaghị maka ọdịyo nkagbu [Nyochaa]